ရန်ကုန် မွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နိုင်စိုးအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / ရန်ကုန် မွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နိုင်စိုးအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ January 9, 2015 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 537 Views
ရန်ကုန် မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီဥက္ကဌ နိုင်စိုးအောင်နဲ့ IMNA သတင်းထောက် စောဇင်ညီ တို့ပာ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီရုံးခန်းမှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
IMNA-ဆရာအနေ့ လူငယ်ဘဝတုန်းက ကျောင်းတက်နေရင်းနဲ့ ဒီမွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီမှာ ဘယ်လိုကြောင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ?
နိုင်စိုးအောင်-အဓိကတော့ မွန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ အတွက် မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးအဖွဲ့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ဒါက ကိုယ်လူမျိူးရဲ့ တာဝန် တစ်ခု ကို ထမ်းဆောင်ရမဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်လေးရှိလို့ပါ။မွန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကို။(ရယ်လျှက်)
IMNA-ဒီဥက္ကဌနေရာကို ရောက်လာအောင် ဆရာအနေနဲ့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခဲ့လဲ?
နိုင်စိုးအောင်-ကျွန်တော်တော်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စာပေယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီမှာ နည်းနည်းကြီးမားတဲ့ တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်၊ ဒီလို အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ အခါမှာလည်းဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းက မွန်လူမျိူးတွေက အားကိုးယုံကြည်တာလည်းပါတယ်၊ ပြီးသွားတဲ့ စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီက အဖွဲ့ဝင်ပောင်းတွေက လည်း ကျွန်တော်ကို ယုံကြည်လို့ ဆက်ပြီးတော့ ထမ်းဆောင်ပေးပါလို တောင်းဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ကြီးဘဲတော့မဟုတ်ဘူး၊ ပြီးခဲတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက တက်လာတဲ့ သူတွေက လည်း နိုင်စိုးအောင်က လာမဲ့သက်တမ်း နှစ်နှစ်မှာ ဥက္ကဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရင် သင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ ရွေးချယ်ပေးကြတယ်။
IMNA-ဆရာဥက္ကဌ မဖြစ်ခင်ပေါ့နော် ရှေ့ မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု လုပ်ငန်းတွေကို အားရကျေနပ်မှုရှိပါသလား? အခုဆရာ မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဥက္ကဌ တစ်ဦးအနေနဲ ပြောပြပေးပါဦး။
နိုင်စိုးအောင်-မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီက ၁၉၇၂ ကတည်းက စပြီးတော့ ဒီရန်ကုန်မှာ တက်သိပညာရှင်တွေ မွန်မျိူးချစ်တွေ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုပေါ့နော်။ ခောတ်အဆက်ဆက်က လည်း သူတို့ရဲ အဓိက တာဝန်က ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ မွန်မိသားစုတွေ မွန်စာပေကို လွယ်လွယ်နဲ့ သင်ကြားနိုင်ဖို့ မွန်တွေရဲ့ ဒလေ့ ထုံးစံ အနုသုခုမ တွေကို အလွယ်တကူနဲ့ လေလာနိုင်ဖို့ထိန်းသိန်းနိုင်ဖို့ပေါ့။မွန်ဒေသမှာရှိတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို မွန်ဒေသမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ကူညီပံပိုးဖို့ ပေါ့။ ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေးရှေးတုန်းက မွန်အကြီးအကဲတွေက ဒါကို ဖွဲစည်းခဲ့တာပေါ့နော်။လုပ်နိုင်ခဲ့သလောက်လဲလုပ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ ၁၉၇၂ ဆိုရင်တော့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ခောတ်ပေါ့။ အဲဒီခေတ်မှာ အဲဒီဘောင်အတွင်းကနေပြီးတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်က နေပြီးတော့ သူတို့က သွားရတာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက လည်း သူတို့နိုင်သလောက်သူတို့ ထန်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့။ ပြီးခဲ့တဲ့၈၈ နောက်ပိုင်းဆိုလည်း အကန့်အသတ်နည်းနည်းရှိတယ်လေ။ အဲဒီမှာလည်းဘဲ သူတို့နိုင်တဲ့ဘက်က သူတို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့ အခါကျတော့ ဒီထက်ပိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
IMNA-ဆရာအနေ့နဲ့ ကော ဆရာဥက္ကဌရာထူးရရှိပြီးတဲ့ အချိန်ကနေ စပြီး ဘာတွေ ဆက်လုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိလဲဆရာ?
နိုင်စိုးအောင်-အဓိက ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ မွန်တွေကို မွန်စာတွေ လေ့လာနိုင်ဖို့ မွန်ယဉ်ကျေးမှုကို အမြတ်တနိုးနဲ့ လေ့လာနိုင်အောင် ပေါ့။ ဒါကတော့ ကနဦးပေါ့နော်။ နောက်ပိုင်း တခြားတခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ လည်းဘာတွေပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လို့ရမလည်း၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်တဲ့ အမြင်လေးတွေ လူငယ်လေးတွေကို ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပါတာပေါ့နော်။ အဓိက လူငယ်တွေအတွက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်။မွန်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စတွေကိုဘဲ အများသော ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
IMNA-အခုလက်ရှိ ရန်ကုန်မှာ မွန်လူဦးရေက ၆ သောင်းကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ သိထားတယ်ဆရာ။ အဲဒီ ၆သောင်းကျော်ကို မွန်စာပေသင်ကြားဖို့က ဆရာတို့ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလဲဆရာ?
နိုင်စိုးအောင်-ကျွန်တော်အတွင်းရေးမှုးလုပ်ခဲ့တုန်းကလည်း ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ မွန်စာ သင်ကြားဖို့အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ မွန်ကျောင်းသားတွေကို မွန်စာပေသင်ကြားဖို့အတွက် သူတို့က ကောင်းကောင်း မွန်စာပေ သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အတွက် သူတို့က ဒီမှာ ကျောင်းဆရာပြန်လုပ်ပေးတယ်။ ပြန်သင်ပေးတယ်။အခုနောက်ပိုင်းလည်း တက္ကသိုလ် တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ကိုင်သွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မွန်ကျောင်းသားတွေကို သူတို့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် တွေမှာ နယ်မှာရှိနေတဲ့ မွန်ဆရာတွေ ခေါ်ပြီးတော့ သင်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
IMNA-အခက်အခဲ ကကော ဘာတွေ ရှိလဲဆရာ?
နိုင်စိုးအောင်-အဓိကတော့ ရန်ပုံငွေပေါ့။ ရန်ပုံငွေရှိရင်ရှိသလောက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ မွန်တွေရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုပေါ့နော်။ အခုနောက်ပိုင်းကတော့ စီးပွားရေးအပေါ် အခြေခံတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။စီးပွားရေးကျပ်တည်းတော့ သားသမီးတွေကို မွန်စာသင်စေချင်တာတောင်မှ ကျောင်းပို့ နိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ တစ်ပိုင်းပြန်ကြည့်ရင် ကျောင်းဆရာတောင်မှ အရင်လို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မရတော့ဘူး။ သူတို့လာဖို့ နေဖို့ ထိုင်ဖို့ စားဖို့ သောက်ဖို့ သွားဖို့ လာဖို့ တာဝန်ယူပေးရမယ် ဆိုတော့ အများသောအားဖြင့် အဓိကအကြီးဆုံး က တော့ ရန်ပုံငွေပါဘဲ။
IMNA-မွန်ပြည်နယ်မှာ မွန်စာပေသင်ကြားဖို့ကော ဆရာတို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်သွားမလဲဆရာ?
နိုင်စိုးအောင်-မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အဓိက ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေမှာမူလတန်း အလယ်တန်း နဲ့ အထက်တန်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ ပြဌာန်းပေးနိုင်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမျိူးတွေကို စာပေသင်ကြားတဲ့ နေရာမှာ အကြီးမားဆုံးအထောက်အပံဘဲလေ၊ မွန်ဒေသမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အသီးက လည်း တိုက်တွန်းကြိုးစားနေတာဘဲလေ၊ကျွန်တော်တို့လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်၊ ဒီကိစ္စဖြစ်လာဖို့ အဓိက အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို တောင်းဆိုမယ်၊လွှတ်တော်အရပ်ရပ်ကို တောင်းဆိုမယ်၊ ဒီအကူအပြောင်းမှာတော့ အပာန့် အတားရှိမှာဘဲလေ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်တယ်။
IMNA-မွန်စာပေ တိုးတက်လာဖို့ကော မဂ္ဂဇင်း၊စာစောင်၊ဂျာနယ်တွေ ထုတ်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိလားဆရာ?
နိုင်စိုးအောင်-ကျွန်တော်တို့ မူလ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၆ လ တစ်ကြိမ် မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ် ထုတ်ဖို့ ပါတယ်၊ တကယ်တမ်းလက်တွေ့ မှာ သူတို့ တစ်နှစ်တစ်အုပ်လောက်ဘဲထုတ်နိုင်တယ်၊ နောက်ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ သက်တမ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ဥပမာ ၃ လ တစ်ကြိမ်လောက် ထုတ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ်၊ မဂ္ဂဇင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ထွက်သွားနိုင်မဲ့ စာစောင်လိုပာမျိူးတွေ ပေါ့၊ ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်၊ အဓိက အခက်အခဲ ကတော့ စာမူပေးပို့ သူတွေအဆက်အသွယ်ရတာနည်း နေသေးတယ်၊ နောက်တစ်ခုက စာဖတ်ပရိတ်သတ် နည်းသေးတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သက်တမ်းမှာ ဝက်ဆိုက် လို ပာမျိူးတောင် လွှင့်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
IMNA-မွန်ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပပျောက်ခြင်းမရှိ အောင် ဆက်လက်ပြန်ပွားလာအောင် ဆရာတို့ အနေနဲ့ ဘယ်လိုကြိုးစားသွားမလဲ ဆရာ?
နိုင်စိုးအောင်-ထိန်းသိမ်းနိုင်သလောက်ထိန်းသိန်းသွားပါမယ်၊ အစီအစဉ်တွေလဲရှိပါတယ်။လာမဲ့ ၃ လ လောက်မှာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါမယ်၊ အခုတော့ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မတိုင်ပင်ရသေးတာလည်းပါတယ်၊ ဥပမာပေါ့နော် ယဉ်ကျေးမှုကို ထန်းသိမ်းတဲ့ နေရာမှာ မွန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆိုက ရေးတီးပြိုင်ပွဲတွေ လုပ်ပေးမယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ရှေးပောင်းနှစ်ပါးသွားတွေ၊ရှေးပောင်းသီချင်းတွေ၊ အနုသုခုမနဲ့ ဆိုင်တဲ့ လက်သုံးကရိယာတွေ၊ ဒါတွေံအကုန်လုံးကို ပြန်ပြီးတော့ ဖော်ထုတ်သွားမယ်၊မျိူးဆက်သစ်တွေကို ဆက်ပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းပေးမယ်၊ ဒါမဲ့ ခောတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရေစီးကြောင်းကိုတော့ မတားစီးနိုင်ပါဘူး၊ကျွန်တော်တို့ တက်နိုင်သလောက်တော့ ဖော်ထုတ်သွားပါမယ်၊ မနိုင်တဲ့ပာကတော့ မတက်နိုင်ပါဘူး၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းမပျက်အောင်နိုင်တဲ့ဘက်က ထိန်းသိမ်းသွားပါမယ်။
IMNA -ပြီးတော့ ဒီမွန်စာပေ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာလက်ထက်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိလဲ?
နိုင်စိုးအောင်-မွန်စာပေယဉ်ကျေးမှုကော်မတီက ၁၉၇၂ ကတည်းက ပြည်ထဲရေးဌာန မှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်၊နောက်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း ခောတ်အဆက်ဆက်က ဥက္ကဌတွေ ကော်မတီဝင်တွေက ဆွဲခဲ့တယ်၊ အခုက တော့ သက်တမ်းက ၄၂ ရှိလာပြီ ဆိုတော့ တချို့နေရာတွေက ခေတ်မမှီတော့တာတွေ ခေတ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်၊ ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာ ဒီလိုအပ်တာတွေ ပြန်ဖြည့်ဖို့ မလိုအပ်တာတွေဖယ်ထုတ်ဖို့ အဲဒါတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ ဖွဲစည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဆက်ကော်မတီဆိုပြီး ဖွဲ့ဖို့ရှိတယ်၊ အဲဒီကော်မတီက လေ့လာတွေရှိချက်တွေကို နာယက ကြီးတွေနဲ့ အကြံပေးကော်မတီနဲ့ အခြားအခြားသော မွန်တက်သိပညာရှင်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်၊ နယကထဲမှာ ကော်မတီကနေ အနားယူသွားတဲ့ ကော်မတီနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ လူကြီးတွေပါဝင်ဖို့ရှိပါတယ်၊ ဥက္ကဌ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေပါဝင်ဖို့ရှိပါတယ်၊ပြင်ဆင်မဲ့အချက်တွေက တော့ ကော်မတီဖွဲပြီးမှ ပြောလို့ ရပါမယ်။
IMNA – ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ၊ မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပာ ဆရာအတွက်ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါသလဲ ဆိုတာပြောပြပေးပါဦး?
နိုင်စိုးအောင်- စာပေတစ်ခု ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပေါ့နော်၊ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ဆိုတာလည်း မလွယ်ပါဘူး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှေးတုန်းက ပညာရှင်တွေ အကြီးအကဲတွေ မျိူးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အသက်သွေးချွေးနဲ့ ဒါတွေကို ထိန်းသိမ်းလာရတာလေ၊ နောက်ပြီး ဘာသာစကား တစ်ခု နဲ ့တစ်ခု ဆင့်ပွားလာဖို့ဆိုတာ နှစ်ပေါင်းများစွာအရင်းအနှီးတွေ စိုက်ထုတ်ခဲ့ရတာ၊ ဒီနေ့ အထိ ကျွန်တော်တို့ စာပေတစ်ခု တည်တန့် နေတယ်ဆိုတာ ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေ အများကြီး ကြိုးစားထားလို့ပါ၊ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ပေါ့ပေါ့ တန်တန်ထားလို့ မရဘူးလေ၊ပြန်ပြီးတွက်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ မွန်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စာပေက အမတန် ထူးခြားမှုရှိတယ်၊ ပညာရှင်တွေက တော့ ကျွန်တော်တို့ စာပေက ပျူနဲ့ခောတ်ပြိုင်ဘဲပေါ့နော်၊ ပျူက အေဒီ ၄ ရာစုမှာ သူ့စာပေကိုတွေ့တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွန်စာပေကတော့ အေဒီ ၅ရာစုမှာ တွေ့တယ်၊ အင်မတန်မှ ဒီလိုရှေးကျတဲ့ စာပေ အသန့်ဆုံး အသက်စုံ အဆွဲစုံ ဗျဉ်းစုံ သရစုံ ဆိုတဲ့ အင်မတန်မှရှားပါတယ်၊ တကယ်ကို ထိန်းသိမ်းသင်တဲ့ စာပေပါ။
ယဉ်ကျေးမှုက အက တစ်ခုခု ဖန်တီးရင် လက်တွေ့ဘဝကို ဖန်တီးတာ၊ ကောက်စိုက်သမတွေရဲ့ ကောက်စိုက်ပာံတွေ၊ တံငါသည်တွေရဲ့ တံငါဖမ်းနေတဲ့ ပာန်တွေပေါ့နော်၊ အကထဲမှာ ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်၊ သဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ပာတွေ ဖန်တီးထားတယ်ပြီးတော့ တူရိယာပေါ့နော်၊ မိချောင်း တူရိယာဆိုရင် အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိူးတွေဆီမှာဘဲရှိတယ်၊ ခမာမှာတောင်မှ တကယ်မိချောင်းတူရိယာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ အသံထွက်တော့ ကွာတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က မိချောင်းတူရိယာကို တစ်ခုတည်းသော ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ လူမျိူးပေါ့နော်၊ ဒီယဉ်ကျေးမှု အနုသုခုမ တွေကလည်း အင်မတန်ရှေးကျပြီး နက်နဲခဲ့တယ်၊ ရှေးလူကြီးတွေက ခက်ခက်ခဲခဲတီထွင်ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်၊ ဒါတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။
IMNA – ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင် ဆရာများ နောက်ထပ်မှတ်ချက်ပြုစရာရှိရင် ပြောကြားပေးပါဦး?
နိုင်စိုးအောင်-ကျွန်တော်တို့က မွန်တိုင်းရင်းသားတွေပါ၊ တိုင်းရင်းသားလို့ ဆိုကတည်းက ပြည်ထောင်စုမှာပါဝင်နေတဲ့ စိတ်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်၊ ပြည်ထောင်စုကို ထိန်းသိမ်းချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်၊ အပြန်အလှန်လေးစားတဲ့ စိတ်ထားတွေမွေးရမယ်၊ ပြည်ထောင်စုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိရမယ်၊တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းရိုင်းပင်းဖို့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း အနိုင်မကျင့်ဖို့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိသင့်ပါတယ်။
IMNA – အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ?
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ မှာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ရန်ကုန်၊ မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ အမှုဆောင် စာရင်း အသစ်များထဲမှာ နိုင်စိုးအောင်ပာ ဥက္ကဌ နေရာ မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူပာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်ကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်ဖို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာကနေ မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီရဲ့ လူငယ်ရေးရာ ဆပ်ကော်မတီတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ကနေ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ မွန်လူငယ်ရေးရာ ဆပ်ကော်မတီ စည်းရုံးရေးမှူး၊မွန်အမျိူးသားနေ့ကျင်းပရေး အတွင်းရေးမှူး၊မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီရဲ့ အတွင်းရေးမှူး စတဲ့တာဝန်တွေကို အဆင့်ဆင့်ထန်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ မွန်လူဦးရေ စစ်တမ်းကောက်ရာမှာ လည်း စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ အဖြစ်တာဝန်ယူပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
စောဇင်ညီ မေးမြန်းချက် 2015-01-09
Previous ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် CSO, NGOs များ လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆွေးနွေး
Next ခလေးငယ်အားမုဒိန်းကျင့်သည့်အပြင် လူမမယ် ၂ ဦး သတ်ဖြတ်သူကို ဖမ်းဆီးထား